Ukuhambisa lokhu noma leso sifo, umzimba wethu udinga isikhathi esiningi namandla ukuze alulame ngokuphelele. Phela, ukubuyiselwa komzimba kuyinkimbinkimbi kakhulu futhi kuyinde futhi ukuze kuphuthumise, kudingeka ulandele izincomo ezithile, esizozama ukuzenza kule ncwadi ngaphansi kwesihloko esithi: "Indlela yokusiza izitho ezibuthakathaka."
Izimbangela zokunciphisa umzimba, ngaphezu kwesifo, zingaba izici ezihlukahlukene. Isibonelo, ukukhathala emsebenzini, ukuhlala ngendlela yokuhlala, ukungabi nokulala, ukudla okunomsoco, noma ukungabi nomoya omusha ngobuningi obudingekayo. Izimpawu ezisemqoka zenyama ebuthakathaka yizinsizi, isizungu, ukungondleki kahle, nokunciphisa okunesisindo. Ukuthola okuphelele umzimba akudingi kuphela amavithamini, kodwa futhi nezinhlelo ezihlukahlukene ezingasheshe zenze le nqubo. Impendulo yokuqala embuzweni: "Ungasiza kanjani umzimba obuthakathaka? "Uyosebenzisa umuthi wendabuko. Okokuqala, lokhu kuhlanganisa imikhiqizo yezinyosi.
Ukuze usize ukubuyisela ukudla, kutuswa ukuba udle uju wemvelo. Yile mkhiqizo ongawugcwalisa umzimba wamavithamini nama-protein awusizo olahlekelwe ngumzimba futhi unike amandla umzimba onobuthakathaka ukuze uthole inani lamakhilori asebenzayo adingekayo ekuphileni okuvamile. Ukuze uthole umphumela ophumelelayo, kwanele ukufaka ekudleni kwakho kwansuku zonke amathisipuni amabili alo mkhiqizo wezinyosi.
Ingxube yobusika wemvelo neyosikazi isisiza kakhulu impilo yabantu. Lezi zithako ezimbili kufanele zixutshwe ndawonye ngamaphesenti amabili kuya kwesinye, ngamanye amazwi, ama-brood kufanele abe yingxenye eyodwa, noju ujubili. Phuza lesi sinkinga kunconywa kanye ngosuku ngosuku lwesipuni.
Enye indlela ephumelelayo yokubuyisela wonke umzimba, futhi, ngokuvumelana nalokho, ukuzivikela komuntu, ingxube yama-walnuts noju kuyabonakala. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthatha ama-walnuts noju (ama-gramu angu-50 kokubili) futhi uhlanganise ngokucophelela konke. Sebenzisa le nkinga kunconywa kanye ngosuku ngosuku lwesipuni.
Ukubuyisela umzimba emva kwesifo izingane kahle kakhulu kusiza izithelo, oatmeal kanye noju. Ukwenza, udinga ukuthatha isipuni esisodwa sezithelo ezomisiwe, i-walnuts, uju, i-oatmeal, wezipuni ezintathu zamanzi angaphambi kokubiliswa, isigamu selamula kanye ne-apula eyodwa. Bese uthele ama-flakes ngamanzi bese uma amahora angu-4. Bese wengeza ijusi lemon, izithelo ezomile, i-apple ekhishwe kahle bese uyixuba nge-walnuts noju uju. Nika le ngxube ingane idinga, cishe amahora amabili ngaphambi kokudla.
Ngaphezu kwalokho, ukusiza umzimba ukuba ululame ngokushesha kungase kuhlanzwe ngokuphelele. Nazi ezinye zokupheka zemithi yomuntu ongaqinisa futhi ahlanze umzimba.
Eminye imithi engcono kakhulu yabantu engasiza ekuhlanzeni nasekuqiniseni umzimba yilokhu okulandelayo:
1. Thatha ingilazi eyodwa yezinhlamvu ze-flax bese uwagcwalisa ngamalitha amathathu amanzi abilayo, bese uyibeka ebhodini lokugeza futhi ubambe lapho cishe amahora amabili. Emva kwesisombululo, kubalulekile ukupholisa nokudla ilitha elilodwa ngosuku (kusukela ekuseni kuze kube ngehora leshumi nambili ekuseni).
Lelashwa kumele isetshenziswe ngaphakathi kwamasonto amabili.
2. Thatha amagremu angamakhulu amabili amaqabunga e-alo, i-walnut, omisiwe, ama-apricot omisiwe kanye ne-lemon eyodwa. Ngemuva kwalokho, konke lokhu kuhlanzwa futhi kubanjwe nge-grinder yenyama. Bese wengeza uju wemvelo, cishe amathathu wezipuni uphinde uhlanganise kahle. Ukusebenzisa isisombululo esitholiwe kunconywa kabili ngosuku ngelinye isipuni.
Ngenxa yalezi zokupheka, ungasiza umzimba obuthakathaka ukuba ululame futhi usebenzise amandla amakhulu.
Ngaphezu kwakho konke okushiwo ngenhla, sikunikeza ezinye izincomo ezilula ezizokusiza ukuba uphakamise impilo yakho futhi ugcine ngendlela efanele.
1. Sebenzisa amanzi amaningi ngangokunokwenzeka. Ukuhlanza umzimba okujwayelekile, umuntu kufanele adle cishe amalitha amabili wamaminerali ngosuku ngaphandle kwegesi.
2. Namathela ekudleni kwelayisi. Lokhu kudla kuhlanza umzimba kahle. Lokhu kudla kufanele kube usuku olulodwa. Ukuze uthole ukudla okunomsila, kudingeka ubilise amagremu angamakhulu amabili elayisi ekuseni, bese uwahlukanisa ube izingxenye ezine ezilinganayo bese udla usuku lonke. Ngaphandle kwelayisi, kuvunyelwe ukufaka phakathi kokudla kwakho kwelanga elilodwa ubhanana ababili kanye nabambalwa noma amajikijolo amasha (ama-strawberries, ama-raspberries, ama -berberries). Phuza ngalolu suku kunconywa uketshezi olungenalutho olusetshenzisiwe ngenani lamalitha amabili. Ukudla kwelayisi kubhekwa njenge-caloric kakhulu, yingakho kufanele isetshenziswe usuku olulodwa kuphela. Lolu suku lungcono ukukhetha usuku lapho ungakhathali khona, isibonelo, ngempelasonto ifaneleka kakhulu.
3. Zama ukufaka ekudleni kwakho imikhiqizo ewusizo kakhulu engakwazi ukuhlanza umzimba. Le mikhiqizo ihlanganisa:
- ama-citrus: kokuqukethwe kwawo kuwusizo kakhulu emzimbeni womuntu i-vitamin C. Ngaphezu kwalokho, i-grapefruit ne-orange ziyakwazi ukususa wonke ama-radicals mahhala nokungena ngokweqile;
- sebenzisa lezo zokudla lapho i-cellulose iqukethe inani elikhulu. Lokhu kuhlanganisa: i-lentils, okusanhlamvu okuhlukahlukene, ubhontshisi;
- Ungakhohlwa ngemifino, iqukethe inani elikhulu lamavithamini eliqinisa umzimba womuntu.
4. Ungakhohlwa ukuhola impilo esebenzayo futhi ngangokunokwenzeka ukuba uphume emoyeni omusha. Ukuzivocavoca njalo kungathuthukisa umzimba emzimbeni. Ngakho-ke, ukuhamba kusihlwa ngaphambi kokulala, hamba masinyane.
5. Zivimbela ukuphuza, ukuphuza ikhofi nokubhema ugwayi. Yiqiniso, akufanelekile ukwenqaba ngokuphelele, kodwa ngesikhathi senqubo yokutakula sikukhuthaza kakhulu.
Ngakho-ke sibuyekeze uhlu lwezincomo ezidingekayo ezithombeni ezibuthakathaka ukuze kutholakale ngokushesha. Ukunamathela kubo, ngokuqinisekile uzosheshisa inqubo yokuthola futhi uzwe amandla amakhulu. Inhlanhla futhi ungaguli!
Umsebenzi weSolar nomthelela wayo empilweni yomuntu
Umzimba wesifazane ngesikhathi sokulahlwa
Hlola imbangela yesimo esingathandeki somzimba
Imikhiqizo emihlanu engadli ukudliwa kwasekuseni
Yini okufanele uyenze nomakhelwane bomsindo?
Tart nge-chocolate filling kanye namaprotheni ukhilimu
Indlela yokuphatha i-diathesis ye-allergen enganeni?
Izici ezijwayelekile zezimpawu zezinkanyezi
Amaprotheni okudla okunomsoco
I-dystrophy yama-muscular: imbangela, ukwelashwa
Burgers ngegundane ngesiGreki
Ingulube ihlanjwe ngewayini elibomvu